Shan(S) – Department of Medical Service
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) တောင်ကြီး၊ ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိတ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဘေး၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ လွိုင်လင်မြို့။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ (က) ဖုန်းနံပါတ် – ၀၈၁ – ၃၁၀၀၁၂၊ (ခ) Fax – ၀၈၁ – ၃၁၀၂၈၇၊ (ဂ) Email – loilemgeneralhospital @ gmail . com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ (General/ Speciality Units) (၁) ပြင်ပလူနာဌာန (၂) ဖျားနာကုသဆောင် (၃) သားဖွားမီးယပ်ဆောင် (၄) ကလေးကုသဆောင် (၅) ခွဲစိတ်ကုသဆောင် (၆) အရိုးကုသဆောင် (၇) မျက်စိဌာန (၈) နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းဌာန (၉) သွားနှင့်ခံတွင်းဌာန (၁၀) အကြောအဆစ်ဌာန ၄။ ... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) နှင့်ဓါတ်ပုံ Location – ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိတ် သို့ သွားသော ပြည်ထောင်စုလမ်းမ ကြီး ၏ဘေး ရပ်ကွက် (၁) ခိုလမ်မြို၊့ နမ့်စန်(တ)မြို့နယ်၊ ရှမ်း (တောင်) အတွင်း တည်ရှိပါသည်။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ Office E – mail address – klmhospital 100@ gmail.com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ( General / Speciality Units ) ခိုလမ်မြို့ ၊ ခုတင် (၁၀၀)ဆံ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံ တွင် အထူးကုဆရာဝန်များ မရှိသော်လည်း ကလေးဆောင်၊ ခွဲစိပ်ေဆာင်၊ဖျားနာဆောင်၊ သားဖွားမီးယပ်ဆောင် နှင့် ပြင်ပလူနာဌာနတို့တွင် ဆေးရုံအုပ် နှင့် လက်ထောက်ဆရာဝန်တို့မှ... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) နှင့်ဓါတ်ပုံ Location – ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) ၊ကလောမြို့ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် -၀၈၁ -၅၀၁၃၃ ၊ ၀၈၁-၅၀၁၅၅ Fax နံပါတ် – ၀၈၁- ၅၀၁၃၃ ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ( General / Speciality Units ) ၁။Emergency & OPD Ward ၂။ Surgical Ward ၃။ Medical Ward ၄။ Child Ward ၅။ Maternity Ward ၆။ Ortho Ward ၇။ Dental Unit ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ ( ၄-၁)General OPD Timetable နေ့စဉ် နံနက် (၈:၀၀)နာရီ မှ ညနေ ( ၄:၀၀)နာရီထိ (၄-၂) Specialist Timetable ၂။ Surgical Ward – ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၃။ Medical Ward – တနင်္လာနေ့ ၊ကြာသပတေးနေ့ ၄။ Child Ward – ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၅။ Maternity Ward-အင်္ဂါနေ့... Read More | Share it now!
Posted on April 23, 2019 by Author 2
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) နှင့်ဓါတ်ပုံ Location – ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ စဝ်စံထွန်းရပ်ကွက်၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှေ့၊ တောင်ကြီးမြို့။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် ၀၈၁-၂၁၂၃၄၁၉ Fax No ၀၈၁−၂၁၂၁၁၀၄ ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ( General / Speciality Units ) General Unit General Medicine Department General Surgery Department Orthopaedic and Traumatology Department Oro-maxillofacial Unit (Dental Unit) Eye ENT Radiotherapy and Medical Oncology Department Imaging Department Laboratory & blood bank Physiotherapy Unit Dermatology Psychiatric Unit Forensic Medicine Department ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (၄−၁)General OPD Timetable ပြင်ပလူနာများအား... Read More | Share it now!